Indlela yoku-ayina ihempe ngaphandle kwentsimbi-Iingcebiso kumadoda aSisitayile | Amadoda aQinisekileyo
Ngaba unoku-ayina ihempe ngaphandle kokusebenzisa i-ayoni? Impendulo nguewe. Ngokuqinisekileyo uzive ungxamile ngaphezulu kwesihlandlo esinye malunga noku-ayina ihempe ngaphandle kokufumana isinyithi. Imibimbi yifom engabukekiyo kuyo nayiphi na impahla oyinxibayo kwaye iyonakala lula. Kukho amaqhinga okukwazi uku-ayina iimpahla zakho ngaphandle kokwenza ubunzima kubomi bakho kwaye ukwazi ukusebenzisa ezinye izixhobo esinayo ekhaya.
Kungenzeka ukuba uyahamba kwaye ezo shirts ubuziphethe kwisutikheyisi yakho ziphela sele zishwabene. Okanye ukuba unesivumelwano esibalulekileyo kwaye i-ayisebenzi ayisebenzi ukuze uphume ungenasiphako. Kufuneka uyazi loo nto kukho amaqhinga amahle alula, kuba ukuba sisebenzisa ubushushu okanye umphunga ngobuchule siya kuba nakho ukulawula loo mibimbi yonwabileyo.
1 Indlela yoku-ayina ihempe ngokulula kwaye ngaphandle kwentsimbi
1.1 Sebenzisa umphunga ngelixa uhlamba okanye uhlamba
1.2 Ngomphunga ovela kwiketile
1.3 Sebenzisa i-casserole njenge-griddle
1.4 Sebenzisa isomisi seenwele kunye nesomisi sokulungisa iinwele
1.5 Tshiza amanzi ashushu okanye iviniga
1.6 Sebenzisa ubushushu kwisomisi
1.7 Ngelaphu elifumileyo
Indlela yoku-ayina ihempe ngokulula kwaye ngaphandle kwentsimbi
Ihempe zizambatho ezenziwe ngezinto ezinje ngoboya, umqhaphu, isilika okanye ilineni. Uninzi lwezi zinto zithambile kubushushu kwaye banendlela ethe kratya yokuhlamba noku-ayina, koku, baqwalasele indlela yokusebenzisa la maqhinga.
Ezinye zezi ngcebiso banokonakalisa izinto zala malaphu, nangona umphunga yindlela yokulawula imibimbi ngaphandle kokwenza umonakalo omkhulu kumalaphu. Ihempe ngokubanzi zenziwe ngomqhaphu ke kuya kuba lula uku-ayina ngezi ndlela zilula.
Sebenzisa umphunga ngelixa uhlamba okanye uhlamba
Ungayixhoma ihempe yakho kwihanger kwaye yibeke kufutshane nalapho umphunga uphuma khona kwishawa okanye xa uhlamba. Yikholwe okanye ungakholelwa, umphunga ngokwawo uya kulungelelanisa imibimbi kwaye unyamalale ngomlingo.
Nangona kunjalo, ngumcimbi wokuba nomphunga owaneleyo ukuze usebenze. Akufanelekanga ukuthatha ishawa emfutshane kwaye kwigumbi lokuhlambela elikhulu kakhulu. Njengesiqhelo umphunga kufuneka uhlale uhleli kwaye uxinene kunye negumbi lokuhlambela elincinci ukuze lingasasazeki kwigumbi lonke.
Ngomphunga ovela kwiketile
Ngaba ufuna ukuba nomphunga kwangoko? Ukuba unayo iketile eza kufudumeza amanzi, yigcwalise ngamanzi ulinde ukuba abile. Ngomphunga ophuma ngaphandle unako ukusondeza kwinxalenye yombimbi kwaye ubone ukuba shwaka njani.
Sebenzisa i-casserole njenge-griddle
Beka ihempe yakho apho ungayayina khona. Thatha i-casserole enesiseko esingaphandle esicocekileyo, kwaye usibeke kubushushu bomlilo okanye kwiglasi yodongwe. Ubushushu obuveliswe kwisiseko saso Iya kusinceda uku-ayina imibimbi yehempe.
Sebenzisa isomisi seenwele kunye nesomisi sokulungisa iinwele
Apha singasebenzisa ubushushu bokomisa. Siza kuxhoma ihempe kwindawo yokuhlala kwaye sigxila kubushushu kuyo yonke imibimbi ukuba sifuna ukugudisa. Kufuneka sinyanzelise de sibone ukuba bayanyamalala.
Ekuphela kwento inxenye yamaqhosha, intamo okanye ii-cuffs ezingayi kugqitywa ukuba asisebenzisi i-straightener yokulungisa iinwele. Ngeenwele ezitshisayo zokulungisa iinwele siza kuzisebenzisa ngendlela enye esizisebenzisayo ukulungisa iinwele. Ukuba sifumanisa ukuba kushushu kakhulu, singabeka ilaphu elihle okanye isiqwenga sephepha sisebenzisa oko.
Tshiza amanzi ashushu okanye iviniga
Zama ukuphosa amanzi ashushu kwisitshizi ngokumiswa okuhle kunye ne-30 cm yengubo. Xa ingubo yoma iya kuba ilungile kwaye imibimbi ephawulwe kakhulu iya kuncitshiswa.
Kukho elinye iyeza elililo xuba amanzi ngesixa esincinci seviniga. Lo mxube ufafazwa kwimibimbi engama-30 cm kwisambatho eso. Kuya kufuneka uyome ukuze ubone ukuba imibimbi inyamalala njani ngomlingo, kodwa ulumke usebenzisa eliphi ilaphu ukuze uphawu lungahlali.
Sebenzisa ubushushu kwisomisi
Ukuba usebenzisa isomisi endaweni yokumisa iimpahla kwindawo yokumisa iimpahla, uya kuqaphela ukuba umthetho jikelele iimpahla iphuma igudile kwaye i-ayodini. Kodwa ayizizo zonke iimpahla eziza kuphuma zingenasiphako, ukuze ube nakho setha isomisi enye imizuzu eli-15 kwaye ubeke ihempe ukuze imibimbi isuswe ngokupheleleyo. Xa inkqubo igqityiwe, yikhuphe kumatshini wokuhlamba kwaye uyixhome kwangoko kwiraki ukuze ubunzima behempe bube nomphumo.
Ngamanye amaqhinga, isomisi sisetyenzisiwe ngomnye umsebenzi. Ukwenza umphunga ongaphezulu kwisomisi amanye amacwecwe omkhenkce ayaziswa ngaphakathi kwenkqubo yokumisa. Umphunga okhutshwe ziityhubhu zomkhenkce njengoko zifudumala kwaye zonyuka ngumphunga ziya kususa imibimbi ngokuthe ngcembe engubeni.
Eli qhinga liqulathe yintsimbi ingubo ngelaphu elimanzi, inokuba itawuli ebhityileyo kwaye ukuba kunokwenzeka kushushu. Beka ingubo endaweni ukuze ukwazi ukuyayina kwaye uthambise ilaphu ngaphandle kokuvuza. Singayifaka kwi-microwave imizuzu embalwa ukonyusa ubushushu. Sithatha ilaphu kwaye sicinezela kwimibimbi yehempe uzama ukuyayina ukuze imibimbi isuswe.
Ezi ngcebiso zikhokela izimvo zokukunceda uzithuthuzele ngamaxesha engxaki. xa singenayo i-ayoni esandleni. Kuya kufuneka uhambelane nohlobo lwelaphu ekulula ukulu-ayina kunye nokuba sesichengeni kokuba ukwazi ukumelana nolunye unyango.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » Indlela yoku-ayina ihempe ngaphandle kwentsimbi
Unyango lwasekhaya lwenkwethu kunye noburharha